Dahab - Howling Pixel
Dahab (Ingiriis: Gold) calaamad Au waa curiye kimiko ah oo tiroda atomkiisu tahay todobaatan-iyo-sagaal. Jileeciisa, cufkiisa iyo midabka huruuda ee dhalaalaya ayaa Dahabka ka dhigey mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan taariikhda aademaha. Dahabku waa mid kimiko ahaan aan firfircoonayn taasina waa sababta aanu la daxaleeysan waligii.
Sida ay sheegtay Shirkada Dahab Qodida Dunida ee loo yaqaan (GFMS), xisaabta dahabka ee la qoday waa biloowgii ilaa 2012 waa 174,100 tan oo dahab ah. Taas oo u dhiganta mug dhan 9361 mitir-kuyuubik (m3) (meter cubic). Midaas oo loo kala isticmaalay 50% is-qurxin, 40% maal-gashi iyo 10% warshadaha.
dahabku waxa uu kamid yahay waxyaabihii qarniyadii hore uu aadanuhu isticmaali jirin uuna uisticmaali jirey sida lacagta,qurxinta taajajka boqorada:IWL
Bada Cas ( Af Carabi: البحر الأحمر ) Bada Cas waxey ku taalaa Inta u dhaxeysa Afrika Iyo Aasiya, badani waxey ku darsantaa Badweynta Hindiya. bada cas waxa ay u dhaxaysaa Jasiirada Carbeed iyo Afrika waxaana wadaaga wadamada kala ah Jabuuti, Sucuudiga, Masar, Urdun, Yaman, Eratareya, Suudaan Falastiin iyo Somalia oo ay qayb aad uyari kasoogaarto.
Badweynta Hindiya (Af-Ingiriis: Indian Ocean; Af-Carabi: المحيط الهندي) waa badweynta sadexaad ee ugu wayn aduunka taasi oo dhacda bariga qaarada Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka Badweynta Atlaantik. Badweynta Hindiya waxay ka mid tahay baddaha aduunka ugu waaweyn waxaayna u dhaxeysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ustareliya. Baaxada Badweynta Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 73.481.000 km². Waxay ku xirantahay waqooyiga-galbeed, Marinka Gardafuul.
Xudduudaha Badweynta Hindiya, oo ay soo diyaarisay Ururka Caalamiga ah ee Hormarinta Caalamiga ah 1953-kii, waxaa ka mid ahaa Badweynta Koonfureed laakiin maaha badaha xeebaha ee waqooyiga woqooyiga, laakiin sannadkii 2000 ayaa IHO waxay gooni u goosatay Badweynta Koonfureed si gooni ah, taas oo soo saartay biyaha koonfurta of 60 ° S badweynta Hindiya, laakiin waxay ku jireen xeebaha badweynta waqooyiga.  Meridionally, Badweynta Hindiya waxaa laga soo xigtay Badweynta Atlantic by 20 ° bariga Meridian, koonfurta koonfurta Cape Agulhas, iyo Badbaadada Baasifiga by meridian of 146 ° 55'E, koonfurta ka soo xigta koonfurta ugu fog ee Tasmania. Inta u dhaxaysa waqooyiga badweynta Badweynta Hindiya qiyaastii 30 ° waqooyiga Gacanka Ciraaq.
Taxane taxane ah iyo silsilado isdabajoog ah oo ay soo saarto hotspots waxay ka gudbaan Badweynta Hindiya. Réunion hotspot (firfircoon 70 ilaa 40 milyan oo sano ka hor) ayaa isku xira Réunion iyo Mascarene oo ku yaalla Chagos-Laccadive Ridge iyo Trascan Traps ee waqooyiga galbeedka Hindiya; Xerada Kerguelen (100-35 malyan sanno ka hor) waxay isku xirtaa jasiiradaha Kerguelen iyo Kerguelen oo ku yaalla Nines East Ridge iyo Rajmahal Traps ee waqooyi-bari Hindiya; Goobta Marion (100-70 Milyan sanno ka hor) waxay suurtagal noqon kartaa inay xiriir la sameyso Prince Edward Islands oo ku taal Eighty Five East Ridge.  Meelaha hotspot ah ayaa la jebiyey by
Waxaa ka mid ah xeebaha kulaylaha ah, badweynta Hindiya ee Hindiya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee la isku daro phytoplankton ee xagaaga, sababtoo ah dabaylaha monsoon ee adag. Dabayshu waxay ku qasbaysaa in ay keento xayiraad xoog leh oo xeebta iyo furan, taas oo soo saarta nafaqooyinka meelaha aagga sare halkaasoo iftiin ku filan oo loo heli karo sawirradu iyo waxsoosaarka phytoplankton. Phytoplankton Blooms waxay taageertaa nidaamka badda badda, oo ah saldhigga shabakadda cuntada badda, iyo ugu dambeyntii noocyada kalluunka ee waaweyn. Badweynta Hindiya waxay u dhigantaa qaybta labaad ee ugu weyn dhaqaalaha qiimaha dhaqaale ee ugu qiimaha badan  Kalluunkeeduna waa mid muhiimad weyn u leh waddamada xuduudaha u ah isticmaalka gudaha iyo dhoofinta. Kalluumaysiga kalluumeysiga ah ee ka yimaada Ruushka, Japan, Kuuriyada Koonfureed, iyo Taiwan ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya Badweynta Hindiya, ugu badnaan geedka iyo tuunbada. 
Bir (Metal) waa shey adke ah (curiye, Isku dhis iyo Jaandi) taas oo iftiimaysa, jidh adag leh, isla markaana aad ugu wanaagsan gudbinta dabka iyo kulka.
Birtu waa curiye kimiko kuwaas oo leh calaamado iyo astaamo ka duwan kuwa Bir Ma ahe iyo Bir La Moodkaba.
Birtu waa shey marka la garaaco la qaloocin karo ayadoon kala jabayn, la dhalaalin karo, isla markaana la dhuubi karo ama wax dhuuban laga dhigi karo.
91 curiye oo ka mid ah 118da curiye ee jadwalka Diwaanka Curiye waa bir. 27ka kale ayaa u kala baxa neef, bir ma ahe, bir la mood iyo qeybaha kale ee Diwaanka Curiye.
Si ka duwan cilmiga Kemisteriga, micnaha ereyga bir waa ku kala duwan yahay qeybaha aqoonta. Tusaale ahaan, aqoonyahana xidigaha ee Cilmi Falagu waxay ereyga bir u isticmaalaan dhammaan curiyayaasha marka laga reebo Haydarojiin (H) iyo Hiliyaamta (He) kuwaas oo ah walxaha ugu badan Xidigaha muuqda ee Koonka.
Dhinaca kale, curiyeyaal badan iyo isku dhisyo badan ayaa noqda bir marka kuleyl badan lagu shido, kuwaas waxaa loo yaqaanaa Sheyada Birta ee ka Samaysmay Bir Ma ahe.
Dhulka (Af-Ingiriis: earth, Af-Carabi: أرض) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay.
Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga.
Dhulku waa meereha kaliya ee nolol ka jirto dhamaan meereyaasha aan naqaano. Waxa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 bilyan oo sanno. Dhulka isku-wareegiisa (Circumference) waa 40,007.86 km marka laga xisaabayo dhul badheha, sidoo kale baaxada guud ee oogada dhulku waa 510,072,000 km2 - taas oo ka kooban 148,940,000 km2 dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta 29.2 %; iyo 361,132,000 km2 biyo iyo bad ah, taas oo u dhiganta 70.8 %.Muga dhulku waa 1.08321 ×10 12 km3 halka cufka meeraha dhulku yahay 5.97219 ×10 24 kg. Sidoo kale, miisaanka cuf ee dhulku waa 5.515 g/cm3, halka cufisjiidadka dhul badhehu yahay 9.780327 m/s2 taas oo u dhiganta 0.99732 g. Cadaadiska dunidan waa 101.325 kPa (MSL).
Dhul Udug waa dhulkii ee degenaan jireen masaaridii hore. iyo afrikaan isku jiro Ilaa hadda lama oga meesha saxda ah oo ku yaalo dhulkaas.Inkastoo la ogyahay in oo dhulkaas jiro, waxaana lagu qiyaasaa dhulka u dhaxeeyo gacanka cadmeed iyo badda cas.waxaay xariir ganacsi la lahaayeen masar iyo yemen waxaa lagu yaqiinay ineey dhoofiyaan dahab iyo xanjada udgoon ama luubaan African blackwood, ebony, ivory,
waxaay kaloo dhoofin jireen dadka la adoonsado iyo xayawaanka duur joogto oo lagu yaqiinay gobolkan ee masaaridii hore aqoonayahano badan ayaa waxeey xaqiijiyeen in gobolkaas eey lahaayeen dadka la yiraahdo boon
waqtigii dhulkii boonta waxaa lagu macneeyn jiray wadankii udgoonaa ama wadankii ilaaheey meesha saxdaa uu ku yiilay dhulkii boonta waa lagu muransanyahay aqoonyahanada badanaa maanta waxeey rumeeysanyahiin boon ineey ku tiilay koofur bari ee masar in badan ayaa rumeeysan ineey ku tiilay dhul xeebeedka maanta loo yaqaano waqooyiga somalia Djbuti Eritrea waqooyiga ithiopia iyo xeebta bada cas ee sudan si kastaba ahaatee aqoonyahano kale ayaa tilmaamay ineey boon ku tiilay gacanka carabta waxaa sidoo kale suurto gal ah ineey xaduudihii dhulkaas dabooleen afrika iyo carabta koofureed
Diiwaanka Curiye (Ingiriis: Periodic Table) waa miiska shaxda Curiyeyaasha Koonka iyo dhamaan wixii ku dhex jira ka sameeysan yihiin. Waxaa loo habeeyay curiyeyaasha sida u kala badan yihiin tiroda atom, elektaroonada iyo astaamaha fal-gal eey leeyihiin. Diiwaankan wuxuu meel iskugu keenayaa dhamaan macdanta, kimikooyinka, hawoda, biyoha iyo dhamaan walax kasta ood ku aragto dhulka.
Sida la ogyahay, ilaa hada waxaa jira 118 Curiye, kuwaas oo ku xusan miiska Diwaanka Curiye.
| colspan="2" | Khaliif
| - 661–680
wax fah fahina kama hayo dalkayga hooyo waxan ka rajaynaya hadad arag to inaad wax kabadsho .
|} Mucawiya I
| - 744–750
|} Marwan II
| - Mucawiya ayaa noqday hogaamiye
| - Jabkii iyo dhimashadii Marwan II
| colspan="2" | Area
| - 750 C.D (132 H.K)
|} 15,000,000 km2 (5,791,532 sq mi)
| colspan="2" | Population
| - qarnigii 7aad est.
|} Dahab dinar iyo dirham
| Today part of
Ka dib maamulkii Cusmaan binu Cafaan (644–656), waxaa hogaanka dowladii Islaamka la wareegay Mucawiya binu Sufyaan oo si xoog ah ku qabsaday maamulka isla markaana ka dhigey hogaanka Islaamiyiinta mid dhaxaltooyo ah. Mucawiya wuxuu wakhti dheer masuul ka ahaa gobolada dalka Suuriya, markuu la wareegay maamulka dowladii Islaamkana wuxuu magaalo madax ka dhigtey caasimada Dimishiq.Si kastaba ha ahaatee, wakhtigii Umawiyiintu haysay hogaanka boqortooyada Islaamka waxey gaadhsiiyeen dhul aad u balaadhan iyagoo qabsadey waqooyiga Afrika, dhamaan deegaanada Bariga dhexe, meelo ka mid ah Aasiyada kore ilaa meelo badan oo koonfurta Yurub ah sida wadamadda Isbayn, Giriig iyo Jasiiradaha u dhow. Markey Dawladda Umawiyiintu mareysay meeshii ugu sareeysay waxay heysatay dhul aad u balaadhan oo dhan 5.79 mayl labalaaban (15,000,000 km2), taasi oo ah boqortooyadii ugu balaadhneyd ee dunidu aragto iyo mida shanaad ee ugu weyn waligeed.
Joorjiya waa wadan ku yaalo Bariga Yurub iyo Galbeedka Aasiya.
Caasimada Joorgia waa Tibiliisi. Gobolada Joorjiya waxee gaarayaan 53 gobol.tirada dadka neh waxaa lagu qiyaasaa.ilaa.3,720,400 (2016)
Kacbada waa qiblada muslimiinta ee u jeestaan markay tukanayaan kuna dawaafaan xiliga Xajka waana dhismihii ugu horeeyay ee dhulka laga dhiso sida ay Diinta islaamka qabto marka laga hadlayo Kacbada waxaa qasab ah in laga hadlo Masjidul-xaraam waayo waxay ku taalaa Kacbada Masjidul-xaraam dhaxdiisa ayadoo taariikhda masjidka ka bilaabanayso taariikhda Kacbada sharfoon. siduu Islaamka qabo. Kacbada markii hore Malaa'igtaa dhistay Nebi Aadan hortii. magacyada Kacbada waxaa ka mid ah Baytul-xaraam waayo Alle ayaa ka xarimay in dhiig lagu daadshu dhaxdiisa, waxayna ka dhigantahay meesha dhulka dushiisa ugu sharafta badan sida Quraanka kariimka ku cad
(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (سورة آل عمران، الآية 96
Kacbada waxay ku taalaa bartamaha Masjidul-xaraam wanaa dhimo weyn oo joogiisa dhanyahay 15.mitir balaca dhankeeda irida ahna 12.mitir, halaka balaca dhanka gadaal ee dhanka masharaafta10.mitir yahay
qaabkeedana u eg yahay dhagax weyn oo afar gees ah oo saro u qaadan. waagii Nebi Ismaaciil c.s. wuxuu dhamaa dhirirka joogeda 9 dhudhun oo saanqaaf la'aan ah iyo irid iska banaan. ilaa uu ka yimid Tubbac oo saaray saanqaaf kadibna Cabdi mudalib oo u sameeyay ilabaab bir ah oo leh gaanjo Dahab ah wuxxuna ahaa qofkii ugu horeyay oo Kacbada Dahab ku xardha
Cali (Cali binu abi Dalib) - ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐEreyga Khaliif (Caliph; ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ) waa khaliifyadii hogaaminayay maamulka diinta Islaamka, waxaana ka mid ah:
Marooko (Af-Carabi المغرب, al-Maġrib, ama Boqortooyada Marooko waa dal dhaca woqooyiga iyo galbeedka Afrika.
Marooko waa dal carbed, oo badkiisu dhan yahay 710.850 km², haddii lagu daro lamadegaanka Galbeed. shacabka ku nool waxay gaarayaan 31,993,00 qof.
Morocco / (mawduucyada dhegaysta): Carabi: Makhriga, turjumaadda al-maokrib, lit. 'meel qorraxda ku dhejiya; galbeedka'; luqadaha Berbera: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translit Lmeɣrib), si rasmi ah Boqortooyada Morocco (Arabic: المملكة المغربية, turjubaan al-Mamlakah al-Maghribiyah, lit. 'Boqortooyada Reer Galbeedka'; luqadaha Berber: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translation, Tageldit n Lmaɣrib), waa gobol madax bannaan oo ku yaal Waqooyi-galbeed Afrika. Waa mid ka mid ah guryaha dadka ajaanibka ah ee Berbers ah oo asaliga ah.   Juquraafi ahaan, Morocco waxaa lagu gartaa gudaha gudaha xaafadaha dhaadheer, khariidado waaweyn oo lamadegaan ah iyo xeebta fog ee xeebta Atlantic iyo badda Mediterranean.
Kani waa bog ku saabsan sabiibka. Maqaalo kale fiiri midhaha laga sameeyo sabiibkaSabiib (Af-Ingiriis: raisin; Af-Carabi: زبيب)
waa midho la qalajiyey ee canabka. Sabiibka waxaa laga sameeyaa midhaha canabka oo loo dhigo ileyska qoraxda wakhti cayiman, ka dib la dabeeyliyo ka hor intaanan la cunin. Sabiibku waa midho aad u macaan oo laga isticmaalo dhamaan caalamka oo dhan. Inta ugu badan midhah sabiibka waxaa la cunaa ayagoo cayriin (sidii ay kaga yimaadeen midhah canabka), halka deegaano kale ay kariyaan sabiibka ama lagu dhex daro cuntada la karinayo.
Tusaale ahaan, wadanka Soomaaliya waxaad ku dhex arki sabiib lagu dhex kariyay bariis kaasi oo loogu talogalay qurxin iyo macaaneyn. Deegaano kale waxay sabiibka u isticmaalaan khamiirin iyo shiiditaan.Guud ahaan midhaha sabiibku waxay leeyihiin dhowr nooc taasi oo ku xidhan nooca canab ah ee laga sameeyay iyo wakhtiga lagu dhaafay kulka iyo ileyska qoraxda. Midaba ugu badan ee lagu yaqaano sabiibka waxaa ka mid ah: madoow khafiif ah, casaan madoow xiga, cadaan khafiif ah iyo huruud jaamud ah.
Sirkooniyaam (ingiriis: Zirconium) astaanta (Zr) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay afartan (40).
Curiyaha Sirkooniyaam waa bir ka tirsan Transitional Metalska ee guruubka 4aad ee Diwaanka Curiye.
Magaca Sirkooniyaam waxaa laga keenay macdanta Zircon, oo ah isha ugu muhiimsan ee Sirkooniyaamta, taas oo micnaheedu yahay dahab-la-mood.
Soomaal (Af-Carabi: الصومال; Af-Ingiriis: Somalia) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (Af-Ingiriis: Federal Republic of Somalia) (waxaa hore loo oran jirey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya xiligii kacaankii hore), waa Dowlad iyo wadan dhacda Geeska Afrika ee Bariga Afrika. Waxaa ka xiga galbeedka Itoobiya iyo Djibouti, bariga marinka Gardafuul iyo badda Soomaal, koofuur na Kenya.
Waxaa dawlada Soomaaliya ka horeeyay dawladda Darwiish oo ciidanka oo hoogaamin jiray iyo waliba abaanduul guud ka ahaa Ismaaciil Mire. Juquraafi ahaan woqooyi galbeed waxaa ka xiga Jabuuti, iyo Kiinya Koofur galbeed, iyo Gacanka Cadmeed woqooyiga iyo Marinka Gardafuul bariga iyo Itoobiya galbeedka. Waxay leedahay xad badeedka ugu dheer qaaradda Afrika. Waxaa kala duwan qaabka dhulka kuwaas oo kala ah Buuro, Dul iyo Bannaan. Cimiladeeda oo ah lama degaan kulul dhamaan sanadka iyada oo ay jiraan xoogaa dabaylo xilliyeed iyo roobab aan joogto ahayn.
Soomaalka xilliyo hore waxay ahayd meelaha ugu muhiimsan ganacsiga caalamiga ah ee ka dhexeeyay dawladihii hore ee caalamka. Xilli ay ahaayeen Badmareenada iyo ganacsatada Soomaaliyeed kuwo dhoofiya Luubaanta iyo Malmalsha taasoo ka dhignayd kuwo u soo saari jiray Masartii hore, Fiiniqiyiintii, Maysuuniyiintii iyo Baabil taasoo isku xiri jirtay dhammaan gaadiidka Awrta ama Geela ganacsiga Soomaaliyeed waxay la wadaageen Soomaalida xiriir ganacsi. Sida ay la tahay in badan oo taariikhyahano ah iyo kuwa dhiga taariikhda, waxay cadeeyeen Soomaaliya in ay tahay meesha lagu tilmaamay Bunti ee hore taasoo la lahayd xiriir wanaagsan Faraaciintii Masar gaar ahaan xilligii Fircoon "saaxuurac" ee ka midka ahaa boradii Masar casrigii Dawladdii hore, iyo boqortooyadii "Xatshabsuut" ee ka midka ahaa boqoradii qoyskii masar ee sideed iyo tobanaad casrigii dawladda cusub. Waxaa loo malaynayaa arrinkaas dhismeyaasha Ahraamta iyo Macbadyo iyo dhismeyaal ee lagu dhisay Garanayt iyo Shiil Cad taasoo loo malaynayo waqtigeeda isla xililligaas una dhigma kuwa la midka ah ee dhismeyaashii msar. sidoo kale xilliyadii hore, waxaa tartamayay dawlado kuwaasoo isku dayay in ay xiriir la yeeshaan dadyoow deganaa dhuka Soomaaliyeed sida jasiiradda xaafuun raas casayr iyo Malaw iyo Mareeg iyo dariskooda Boqrtooyadii Saba iyo Arshek iyo Boqortooyadii Aksam ee ku salaysan ganacsi iyo qaybo ka mid ah boqoro ka jiray Hindiya iyo Giriiga iyo Roomaanka.
Markii ay ka soo if baxday diinta islaamka meel ku beegan xeebaha soomaaliya Baddacas waxay soo qaateen ganacsatada iyo badmareenada soomaaliyeed ee aadi jiray Jasiirad la mooda carbeed diinta Islaamka taasoo ka dhalatay macaamilka ay la lahaayeen carabta Muslimka ah. Hijrooyinkii ay sameeyeen dad saxaabada ka mid ah meelo badan oo dunida muslimka ah qarniyadii hore ee diinta islaamku faafaysay ayaa waxay sahashay in ay soomaalidu qaadato diinta islaamka si nabad ah macalimiin soomaaliyeedna ayna barayeen dadka, waxaa ka dhismay dhulka soomaaliyeed dawlado iyo magaalooyin islaami ah sida magaalooyinka Muqdisho, Berbera, Saylac Baraawe, Mareeg iyo Marka taasoo ahayad qayb ka mid ah ilbaxnimadii Soomaalida. Waxaa loo yaqiin magaalada muqdisho "Magaaladii Islaamka" Waxaa la joogay ganacsiga dahabka ee ku taal Bariga Afrika qarniyo badan. iyo Casriyadii dhexe, Boqotooyooyin Soomaaliyeed baa la wareegay wadooyinkii ganacsiga sida Ajuraan taasoo xukumaysay dhulka intii u dhexaysay qarniyadii laba iyo tobanaad ilaa todoba iyo tobanaad ciise dabadii taasoo alliftay hindisaha cilmiga dareeraha dheqdheqaaqa iyo dhismeyaasha darbi difaaca, Sidoo kale saldanadii Cadal taasoo imaam Axmed gureey waa ciidankii ugu horeeyay afrika ee adeegsada Madfac dagaalkii lagula jiray xabashida intii u dhexaysay sanadihii 1529 ilaa 1543, sidoo kale qoyskii Goonroon taasoo xukumi jirtay magaalada Laamu ee xiriirka la lahayd saldanada cumaan ee iyana hoos imaan jirtay Cusmaaniyiinta kaasoo ka qaadi jiray Jizyo suldaan axmed yuusuf, suldaankii afaraad ee Ajuuraan kaasoo xukumayay intii u dhexaysay 1848 ilaa 1878. Qarnigii sagaal iyo tobanaad kadib kulankii Baarliin 1884, boqortooyooyinka yurub waxay u soo direen cidmadooda Baragiga Afrika Si ay dhulkaas caalamka istiraatiijiga u ah u qabsadaan taasoo kaliftay in Sayid Maxamed Cabdulle Xassan, aasaasihii dawladdii daraawiishta in uu ciidamo soomaali ah ka soo usruusado geeska afrika oo dhan waxay ahayd inta taariikhda la ogyahay is hortaag kii ugu weynaa ee lagu sameeyo Isticmaarka.
Waxaa u suurta gashay Soomaalida ugu horayn ka hortagga Soomaalida. dawladii daraawiishta waxay iska caabiyeen Ingiriiska afar mar oo isxigta waxaana lagu qasbay in ay dib ugu gurato dhanka xeebaha. waxay jabtay daraawiishta 1920 kadib adeegsigii Ingiriiska adeegsaday diyaaradaha intii dagaalka lagu jiray duqaynta "taleex" caasimadda ciidankii daraawiishta waxaana dhamaan la wareegay dhulkii daraawiishta ciidmadii gumaysiga Ingiriiska. Sidoo kale Talyaaniga wuxuu la kulmay iska caabin kaga imaanaysay salaadiin Soomaaliyeed mana uwada suurta galin in uu wada qabsado qaybo ka mid ah dalka ee hadda loo yaqaan Dawladda Soomaaliya marka laga reebo xilligii fajiistaha dabayaaqadii sanadkii 1927 waxayna haysteen ilaa 1941 kaasoo lagu bedelay xukunkii ciidmada ee Ingiriiska. Woqooyiga Soomaaliya wuxuu sii ahaaday mustacmarad Ingiriis ah halka koofurta Soomaaliya isku bedeshay dawlad madax bannaan laakiin ay la socoto wasaayad ilaa laga gaaro midayntii labada gobol 1960 kuma midoobeen magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Soomaaliya waxay xubin ka noqotay Jaamacada Carabta sanadii 1974. sidoo kale Soomaaliya waxay xiriir fiican la samaysatay dadlalk afrika, waxay ka mid ahayd dawladihii aasaasay Midowga Afrika, waxay taageeri jirtay ANC ee Koonfur Afrika kana soo herjeeday nidaamkii Apartheid ee cunsuriga ahaa waxay kaloo taageertay Soomaaliya dagaalyanada Eratareya intii ay ku jirtay Eretariyiinta dagaalkii looga soo horjeeday Itoobiya. Iyadoo ka mid ah Dawladaha Islaamiga hadana Soomaaliya waxay ahayd aasaasayaashii Ururka Iskaashiga Islaamka sidoo kale waxay xubin ka ahayd Qaramada Midoobay. Soomaaliya iyadoo dhibaato kala kulantay Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya iyo deganaasho la'an ku baahday gudaha, waxay ku guulaysatay abuurista Suuq xor ah kana sareeya inbadan ee nidaamayada dhaqaale ee Afrika kale sida ay sheegtay daraasad ay sameeysay qaramada midobay.
Jamhuuriyada Suudaan ee Carabta waxa la bedely magaicii hore ee suudaan kadib markii Koonfur Suudaan ay ka goday waqoogiyiga Suudaan, wadankani waxa uu ku yaalaa Woqooyiga Afrika. Waxaa soo gumeestay gumeestihii ingriiska. Wadanka Suudaan mar waxa uu ahaa wadanka ugu ween afrika, waxoona xuduud la leyahay wadamada Masar,Libya, Tchad, Itoobiya, , , Ereteriya, ].Wadanka Suudaan waxoo kala go'ay taariikhda marka ee ahayd 9 Luuliyo 2011, . Suudaan waxee markeeda hore xornimo ka heshay gumeestihii ingriiska sanadka marka oo ahaa 1956dii, isla markaas neh wadanka waxoo ku biiray QM,waxaana xukumada qaaday xukumad militari ah oo markaa rabtay in ee wadanka ku xukunto diinta islaamka. Sanadka marka oo ahaa 1972dii ilaa 1982 Suudaan waxaa ka socday dagaalka aduunka ugu foosha xun oona ugu dheer qaarada afrika. Dagaalkaas waxoo u dhaxeeyay waqooyiga Suudaan, oo ah meesha ee caasimada ku taalo, oona ah meesha ugu badan muslimiinta iyo Koonfurta suudaan oo ah meesha karishtaanka ugu badan oona leh saliid.
labada qeebood waxee hishiis rasmi ah kala gaareen, taariikhda markii ay aheyd 9ka Janaayo 2005ta.we
Ubucda dhulku, loo yaqaano (Earth's Core) waa bu'da ama lakabka dhexe ee meeraha dunida.
Qaybtani waa dareere aad u kulul oo leh qiyaastii qaro (thick) dhan 2,266 km (1,408 mi) taas oo kooban birta Aayron iyo Nikel. Ubucda dhulku waxay ka hooseysaa lakabka labaad ee mantleka.
Bu'da dhulku waxay oogada sare ka hooseeysaa dherer dhan 2,890 km (1,800 mi) oo ah meesha Ubucda dhulku ka bilaabanto, ilaa 5,150 km (3,200 mi) oo ah badhtanka dhulka.
Heerkulka ubucda dhulku waxa uu ka bilaabmaa 4400 °C (8000 °F) maqaarka ubucda ilaa 5,430 °C oo ah bu'da dhexe iyo meesha ugu kuleylka badan dhulka. Dhinaca kale, cadaadiska (pressure) Ubucda dhulku waa inta u dhexeeysa 330 ilaa 360
Ubucda dhulku waxay ka samaysan tahay isku dhisyo badan oo u badan Nikel iyo Aayron. Sidoo kale, Dahab iyo Balatiiniyaam badan ayaa iyagana laga helaa badhtamaha dhulka.
Guud ahaan, bu'da dhulka la'aanteed nolosha dunidu waxay noqon lahayd nooc kale, sababtoo ah lakabkani waa sal-dhiga magnetka (magnetic field) dhulka.